BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Taxane Aad Kaga Bogan Doonto Dhammaanba Barnaamij Siyaasadeedka KULMIYE ..Q: 3aad | FooreNews
Home wararka BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Taxane Aad Kaga Bogan Doonto Dhammaanba Barnaamij Siyaasadeedka KULMIYE ..Q: 3aad
BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Taxane Aad Kaga Bogan Doonto Dhammaanba Barnaamij Siyaasadeedka KULMIYE ..Q: 3aad
Ereyga Madaxweyne ku Xigeenka JSL, Ahna Murrashaxa Madaxweyne ku Xigeenka ee Xisbiga KULMIYE
Xisbiga KULMIYE waxa uu ku suntan yahay “xisbigii wax-qabadka”. Muddo-xileedkii uu xisbigu talada dalkeenna hayey waxa uu horumar ballaadhan ka sameeyey dhinacyada arrimaha bulshada, kaabayaasha dhaqaalaha; dib-u- habaynta hay’adaha dawladda, maamul daadejinta; nabadaynta, dhismaha iyo tayeynta ciidammada ammaanka.
Shanta gu’ ee soo socda waxa naga go’an in aannu sii ambaqaadno horumarka dhaqaale, siyaasadeed iyo amni ee uu Xisbiga KULMIYE dalkeenna gaadhsiiyey tan iyo 2010-kii. Waxa aan u arkaa in xidhiidhinta muddo-xileedkii hore ee wax qabadka muuqda laga dhaxlay iyo ka innagu soo foolka leh inay lama huraan u tahay geeddi- socodka horumarka dalkeenna si loo taabo-galiyo, loona rumeeyo riyada iyo himilada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna aasaasaha Xisbiga KULMIYE tilmaamay in loo yagleelay Xisbigan.
Annagoo ka faa’iidaysanayna waayo-aragnimadii aan korodhsannay muddadii uu Xisbigu xilka soo hayey, Xisbiga KULMIYE waxa uu u ballan qaadayaa shacabka Jamhuuriyadda Somaliland aragti ku dhisan horumar, mustaqbal ifaya iyo xaqiijinta jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland ee fagaarayaasha Caalamiga ah. Aniga iyo Murrashaxa Madaxweyne ee Xisbiga KULMIYE ee doorashada 2017-ku waxa aannu nahay murrashaxiin ka waayo-aragsan, ugana aqoon badan tartamayaasha axsaabta kale duruufaha iyo sooyaalkii la soo maray iyo halka dalka Jamhuuriyadda Somaliland ku jihaysan yahay oo ah in uu noqdo Qaran Madaxbannaan.
Barnaamij-siyaasadeedka cusub ee Xisbiga KULMIYE ballanka kula galayo shacabka xariirta ah ee Jamhuuriyadda Somaliland waa barnaamij ku dhisan rumaynta qaddiyadda Jamhuuriyadda Somaliland, dhawrista sharciga iyo dhismaha nolol waarta. Sida Musharraxa Madaxweynuhu tilmaamay, waxa uu ka kooban yahay toddoba Tiir oo waaweyn oo mid kastaa leeyahay furuuc koobaya nuxurka wax-qabad toolmoon iyo dhismaha Qaran cuddoon. Waxa uu hore u sii wadayaa hayaankii horumarka Jamhuuriyadda ee Xisbiga KULMIYE bilaabay. Horaa loo soconayaa; waxa aannu hilaadinaynnaa berri maanta ka fiican.
Madaxweyne Ku Xigeenka JSL, ahna Murrashaxa Madaxweyne Ku Xigeenka ee Xisbiga KULMIYE
Himilada Xisbiga KULMIYE
Barnaamijka Xisbiga KULMIYE wuxuu ka tarjumayaa xaqiijinta himilooyinka hoos ku xusan:
1. Xisbiga KULMIYE waxa uu u hawl-gelayaa xaqiijinta iyo taabbo-gelinta madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland isaga oo u halgemaya in Somaliland noqoto Qaran ka mid ah dawladaha la aqoonsan yahay iyo ururrada Caalamiga ah.
2. Xisbiga KULMIYE waxa uu hiigsanayaa inay bulshada Somaliand noqoto mid isku filan, kana xor ah saboolnimada, jahliga, dulmiga, caddaalad-darrada iyo guud ahaan maamulxumo weji kasta oo ay leedahay.
3. Xisbiga KULMIYE waxa uu u taagan yahay bulsho dimuqraaddi ah oo ay saldhig u yihiin mabaadi’da talo- wadaagga, kuna qotoma diinteenna suubban, dhaqankeenna soo jireenka ah iyo sidoo kale waayo-aragnimada togan ee aynu ka soo dheegan karno horumarka sayniska iyo teknoolajiyada aadamuhu ku tallaabsaday.
4. Xisbiga KULMIYE waxa uu mudnaan siinayaa bulsho nabdoon oo u hiilisa sinnaanta, is-xaq-dhawrka iyo nabad-ku-wada- noolaanshaha ummadda Somaliland, kana dheeraata yasidda, kala-faquuqidda iyo is-qabyaaladaynta.
5. Xisbiga KULMIYE waxa uu u taagan yahay tayaynta hay’adaha dawladda dhinacyada aqoonta, kartida iyo qalabka si ay si wax-ku-ool ah ugu gutaan hawlaha ay ummadda u hayaan.
Xisbiga KULMIYE si uu u gaadho himilooyinkiisa waxa lagama maarmaan ah fulinta tiirarka soo socda:
Previous PostLayaabka Dunida: Nin Ku Guulaystay In Ka Badan 145 Shahaado Jaamacadeed Oo Uu Ku Hantay Muddo Ku Siman 30 Sannadood Next Post“Waa Fariin Ku Socota Cabdale Sandheere, Waakan Ninkii Kaa Adkaa, Ee Kaa Siyaasisanaa Ee Kaa Waayo Aragsanaa, Cabdallow Waxba Halkaasi Kuuma Yaalaan Ee Kulmiye Noogu Kaalay”…………. Badhasaab Ramaax